Ubume boKhenketho eBeijing obunomtsalane obugcinwe ngempumelelo eCopenhagen
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeShishini lokuhlangana » Ubume boKhenketho eBeijing obunomtsalane obugcinwe ngempumelelo eCopenhagen
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • inkcubeko • Iindaba zaseDenmark zokuPhula • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Agasti 17, 2017
Umtsalane woTyelelo lwezoKhenketho lwaseBeijing, esinye seziganeko ezibalulekileyo kwisakhelo sonyaka we-China-Denmark woNyaka woKhenketho ngo-2017, owawusingethwe yiKhomishini kaMasipala waseBeijing woPhuhliso lwezoKhenketho, wabanjwa ngomhla we-14 kweyeThupha eCopenhagen. Bamalunga ne-100 abantu abasuka kwindlu yozakuzo yase-China eDenmark, iWonderful Copenhagen kunye nabameli abasuka kubakhenkethi basekuhlaleni nakwimithombo yeendaba.
U-Hu Hongbo, uSekela-Ntloko we-Ofisi yoZakuzo wase-China eDenmark; Ingoma Yu, uMlawuli-Jikelele weKhomishini kaMasipala waseBeijing yoPhuhliso loKhenketho; U-Lars Thykier, uMlawuli oPhetheyo woMbutho wee-Danish Travel Agents kunye nabaSebenzi boKhenketho, kunye no-Philip Wenzel Kyhl, Umphathi weProjekhthi ePhakamileyo-e China yase Wonderful Copenhagen bathethe kulo mboniso. UCui Hua ovela kwiKhomishini kaMasipala waseBeijing yoPhuhliso lwezoKhenketho, wenze intetho ngezixhobo zokhenketho eBeijing kunye nezixhobo ezixhasayo kunye neenkonzo kubandakanya ezothutho, indawo yokuhlala, ukutya njl. kunye no-Ivan Xu, uSekela Mlawuli oPhetheyo weSebe lokuThengisa iNdawo yokuFikela, i-CYTS International Travel Co, Ltd. wazisa iindlela zokuhamba zeBeijing kunye neemveliso ngokunzulu.
Ingoma Yu uxelele oonondaba, uMongameli wase-China u-Xi Jinping wakhankanya kwintlanganiso yakhe ne-Nkulumbuso yase-Danish u-Anders Fogh Rasmussen ngoMeyi ukuba u-2016 ngunyaka weNkqubela kwaye u-2017 uya kuba nguNyaka wokuVuna kwe-China-Denmark ubambiswano lobuchule. Okwangoku, ngokusungulwa okunzulu kwemisebenzi, la mazwe mabini anandipha ukusebenzisana ngokusondeleyo kunye nokutshintshiselana kwabantu-nabantu.
I-1,059,000 yabakhenkethi baseYurophu batyelele iBeijing ngo-2016 kunye nama-479,000 kwisiqingatha sokuqala sonyaka ka-2017. Phakathi kwabo, inani labakhenkethi abangenayo baseDenmark eBeijing liya lisanda kwaye iDenmark iye yaba yintengiso yabakhenkethi ebalulekileyo eBeijing. I-Beijing ne-Copenhagen baseke ngokusesikweni ubudlelwane bezixeko zoodade ngoJuni, 2012, kwaye ukuza kuthi ga ngoku izibini ezili-15 zamaphondo (izixeko) phakathi kwe China neDenmark. Abakhenkethi abangakumbi baseDenmark bazokuza eBeijing kwaye malunga nama-262,000 abakhenkethi baseTshayina bazakutyelela iDenmark ngo-2017.
Phambi kwale ntetho, igqiza lalineengxoxo kunye neWonderful Copenhagen yokuphumeza iMemorandam yeNtsebenziswano yezoKhenketho etyikitye zombini ngo-2016. Baxoxa ngezihloko malunga nokuqinisa ngakumbi ukutshintshiselana ngolwazi nokwazisa ngentengiso, kwaye ekugqibeleni bafikelela kwisivumelwano ngokubanzi.
Lo msitho ukwazisa ikhethini ye "Charming Beijing" yokunyusa imicimbi eMantla Yurophu ebanjwe yiKhomishini kaMasipala wase Beijing yoPhuhliso loKhenketho. Abathunywa babambe imicimbi ngokulandelelana eHelsinki, eReykjavik naseOdense.